Kuchena kunogadzirira maLibrem 5 ekuvandudza makiti, foni inogona kusvika muna Kubvumbi | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma kupera kwemazororo egore, maPurism akazivisa kuti vapedza kugadzirira zvigadzirwa zvekuvandudza nharembozha yavo yeLibrem 5 Linux uye ichaendeswa kune vese vavaki vayo munguva pfupi.
Kubva pane ine simba nyowani 8-bit i.MX 64M ARM chip, Librem 5 ekuvandudza makiti anosvika kune vese vavambi vakatsigira chirongwa ichi, izvozvi Purism inoda rutsigiro rwese munharaunda kuti ienderere mberi nekukurumidza kuvandudza iyi foni yeLinux nekutarisa kune zvakavanzika uye chengetedzo.
Librem 5 inogona kusunungurwa muna Kubvumbi 2019
Purism inoshuma kuti yayo yekuvanzika uye yekuchengetedza yakatarisana nharembozha Librem 5 ichiri munzira yekutangisa kwaApril 2019, mushure mekunge kambani yanonoka kuvhurwa kwaNdira 2019 nekuda kwetuputi mukuvandudza machipisi. Asi ivo vachiri kuda rubatsiro rwese kubva munharaunda kuti vatarise zvese Hardware uye software.
Iyo Librem 5 ichave yekutanga foni yakanangana nekuvanzika uye chengetedzo, uye ndinovimba ichavewo yekutanga yakabudirira foni kuendesa iyo Linux inoshanda sisitimu. Purism anotenda kuti 2019 ichave iri gore reLinux mafoni, saka kana iwe uchifarira, batanidza imwe yechavo nzira uye ubatsire nekusimudzira.
Sezvo isu tiri mumwaka weKisimusi, maPurism akagadzirira chakakosha kupihwa kune avo vanoda kuwana kwavo kutanga uye kuwana Librem 5 nekukurumidza sezvazvinogona. Yadzo "Ihwo Hupenyu Hwakachengeteka" package inokupa iwe Laptop uye nharembozha yemadhora mazana mashanu nemakumi masere, uyu mutengo uchawedzera kusvika $ 699 muna Ndira 7, 2019.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Purism inogadzirira Librem 5 dev kits, foni inogona kusvika muna Kubvumbi